Ahụmahụ: Platform Channel Marketing | Martech Zone
Ahụmịhe ndị ahịa nke 'ndị na-ere ahịa n'ahịa' na-enye ụdị ikike ijikwa na imezu mmekọrịta ndị ahịa niile n'ime otu sistemụ, na ezigbo oge - wepụ mkpa maka ọtụtụ, nyiwe ndị na-adịghị n'otu na ndị na-ere ọwa n'otu n'otu. Ikpo okwu a na enyere ndi ahia aka imekota ihe omuma ndi ahia site na uzo data obula iji meputa ndi nwere uche, ma di ire karie mmekorita ndi ahia n'ofe email, mkpanaka, mmekorita, web, mbiputa na ngosi.
Ndị ọkachamara na-enye Cross Platform Marketing Platform:
Mwekota data - Nweta ezi echiche panoramic nke ndị ahịa gị site na ijikọ data ndị ahịa site na isi mmalite ọ bụla, na ịkọwapụta Ahụmịhe ahịa Ọrụ 'ndị ahịa bara ụba
Nchịkọta mgbasa ozi mgbasa ozi - N’ezie jikwaa mkpọsa mgbasa ọwa niile ma na - enyefe ndị ahịa gị ụdị ahụmịhe ọhụụ
Njikwa mmekorita - Weghachi azịza nke ndị ahịa gị na mmetụta ha, wee kwalite data ahụ ozugbo maka mmekọrịta gị na ntanetị ọwa dị mkpa
Otu n'ime isi ihe ọkachamara na-eme na broshuọ ahịa obe-ọwa bụ isi… ndị ahịa gị anaghị ahụ ọwa, ha na-ahụ otu ụdị. N'ihi ya, ịkwesịrị ijide n'aka na ị na-ahazi mbọ gafee ọwa iji belata mbugharị, mara ndị ahịa ebe ọ bụla ha nọ, ma gwa ha okwu n'onwe gị ma nye ha mmekọrịta ha nke ọma.
Tags: obe-ọwaahia uzo ahiaobe-ọwa ahịa n'elu ikpo okwunwee ahụmịhe
10 Ahịa Performance stats Iji Mara
Nov 22, 2013 na 1:55 AM
N’oge na-adịbeghị anya, enwere m nnukwu ego na ụgwọ ji m n’akụkụ niile! Nke ahụ bụ ruo mgbe m kpebiri ịkpata ego na ịntanetị. Agara m na onye na-eme ihe na-eme ihe na-emepụta ihe, wee malite imeju nyocha maka ego, ma n'ezie enweela m ike ịkwụ ụgwọ m !! Obi dị m ezigbo ụtọ, emere m nke a !! Site na nrụgide ego niile n'afọ ndị a, enwere m olileanya na unu niile ga-enye ya ohere. - vttm
aJ5u - Afọ ole na ole gara aga enwere m nnukwu ego na ụgwọ na-egbu m site n'akụkụ niile! Nke ahụ bụ Right Ruo mgbe m mụtara ịmepụta ego .. na ntanetị! M rutere na netwọọdụ na-eme nchọpụta, wee malite ịme nyocha maka ego, ma na-eme nke a, enweela m ike ịme ihe m !! Obi dị m ụtọ, na m mere nke a !!! Site na nrụgide ego niile n'afọ ndị a, enwere m olileanya na unu niile ga-enye ya ohere. Ugbolu